1 Samuel 22 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
22 Devid wee si n’ebe ahụ+ pụọ gbaga+ n’ọgba+ Adọlam;+ ụmụnne ya na ụlọ nna ya dum nụrụ ya wee gbadakwuru ya n’ebe ahụ. 2 Ndị niile ihe na-esiri ike+ na ndị niile nwere onye ha ji ụgwọ+ nakwa ndị niile ihe na-ewute ná mkpụrụ obi+ wee malite izukọta n’ebe ọ nọ,+ o wee bụrụ onyeisi ha;+ ndị ikom ya na ha nọ wee dị ihe dị ka narị anọ. 3 E mesịa, Devid si n’ebe ahụ gaa Mizpe nke dị na Moab+ wee sị eze Moab: “Biko, ka nna m na nne m+ binyere unu ruo mgbe m matara ihe Chineke ga-eme m.” 4 O wee mee ka ha biri n’ihu eze Moab, ha wee binyere ya ụbọchị niile Devid nọ n’ebe siri ike ọbụba.+ 5 Ka oge na-aga, Gad+ onye amụma sịrị Devid: “Ebizila n’ebe siri ike ọbụba. Pụọ, bata n’ala Juda.”+ Devid wee pụọ bata n’oké ọhịa Hiret. 6 Sọl wee nụ na a hụwo Devid na ndị ikom ya na ha nọ, mgbe Sọl nọ ọdụ na Gibia n’okpuru osisi tamarisk+ n’ebe dị elu, jirikwa ube+ ya n’aka, ndị niile na-ejere ya ozi guzokwa ya gburugburu. 7 Sọl wee gwa ndị na-ejere ya ozi bụ́ ndị guzo ya gburugburu, sị: “Biko, geenụ ntị, unu ndị Benjamin. Nwa Jesi+ ọ̀ ga-enye unu niile ala na ubi vaịn?+ Ọ̀ ga-ahọpụta unu niile ka unu bụrụ ndị isi nke otu puku otu puku ndị agha+ na ndị isi nke otu narị otu narị ndị agha? 8 N’ihi na unu niile agbaworo m izu; ọ dịghịkwa onye ọ bụla kọọrọ m+ ya mgbe nwa m na nwa Jesi gbara ndụ,+ ọ dịghịkwa onye n’ime unu na-emere m ebere ma kọọrọ m na nwa m emewo ka onye na-ejere m ozi bilie imegide m dị ka onye na-echechi mmadụ dị ka ọ dị taa.” 9 Doeg+ onye Idọm, bụ́ onye e mere onyeisi ndị na-ejere Sọl ozi, wee zaa, sị: “Ahụrụ m nwa Jesi ka ọ bịara Nọb, gakwuru Ahimelek+ nwa Ahaịtọb.+ 10 O wee jụọrọ+ ya Jehova ase; o nyekwara ya ihe oriri,+ nyekwa ya mma agha+ Golayat onye Filistia.” 11 Ozugbo ahụ, eze ziri ozi ka a kpọọ Ahimelek nwa Ahaịtọb onye nchụàjà na ezinụlọ nna ya dum, bụ́ ndị nchụàjà nọ na Nọb.+ Ha niile wee bịakwute eze. 12 Sọl wee sị: “Biko, gee ntị, gị nwa Ahaịtọb!” o wee sị: “Lee m, onyenwe m.” 13 Sọl wee gaa n’ihu ịsị ya: “Gịnị mere unu ji gbaara m izu,+ gị na nwa Jesi, site n’inye ya achịcha na mma agha, jụọkwara ya Chineke ase, ka o bilie megide m dị ka onye na-echechi mmadụ dị ka ọ dị taa?”+ 14 Ahimelek wee zaa eze, sị: “Ònye n’ime ndị niile na-ejere gị ozi dị ka Devid,+ onye kwesịrị ntụkwasị obi,+ bụrụkwa ọgọ+ eze nakwa onyeisi ndị nche gị, bụrụkwa onye a na-asọpụrụ n’ụlọ gị?+ 15 Ọ̀ bụ taa ka m malitere ịjụrụ ya Chineke ase?+ Tụfịakwa! Agbaghịrị m gị izu. Ka eze ghara ibo ohu ya na ụlọ nna m dum ebubo ọ bụla, n’ihi na n’ihe a dum, ohu gị amaghị ihe ọ bụla, ma ọ bụ ihe nta ma ọ bụ ihe ukwu.”+ 16 Ma eze sịrị: “Ahimelek, ị ga-anwụrịrị,+ gị na ụlọ nna gị dum.”+ 17 Eze wee gwa ndị ọgba ọsọ+ guzo ya gburugburu, sị: “Tụgharịanụ gbuo ndị nchụàjà Jehova, n’ihi na ha dụnyeere Devid úkwù nakwa n’ihi na ha maara na ọ gbara ọsọ ma ha akọghịrị m ya!”+ Ndị na-ejere eze ozi achọghị isetị aka ha wakpo ndị nchụàjà Jehova.+ 18 N’ikpeazụ, eze sịrị Doeg:+ “Tụgharịa wakpo ndị nchụàjà ahụ!” Ozugbo ahụ, Doeg onye Idọm+ tụgharịrị wakpo ndị nchụàjà ahụ wee gbuo+ n’ụbọchị ahụ mmadụ iri asatọ na ise ndị yi efọd+ e ji ákwà linin mee. 19 O jikwa ihu mma agha bibie Nọb,+ bụ́ obodo ndị nchụàjà, jirikwa ihu mma agha gbuo ma nwoke ma nwaanyị ma nwatakịrị ma nwa na-aṅụ ara ma ehi ma ịnyịnya ibu ma atụrụ. 20 Otú ọ dị, otu nwa Ahimelek nwa Ahaịtọb, onye aha ya bụ Abayata,+ gbapụrụ soro Devid. 21 Abayata wee kọọrọ Devid, sị: “Sọl egbuwo ndị nchụàjà Jehova.” 22 Devid wee sị Abayata: “Amaara m nke ọma n’ụbọchị ahụ+ na Doeg onye Idọm ga-agwarịrị Sọl,+ n’ihi na Doeg nọ n’ebe ahụ. Emejọwo m mkpụrụ obi ụlọ nna gị dum. 23 Binyere m. Atụla egwu, n’ihi na onye ọ bụla nke na-achọ mkpụrụ obi m na-achọ mkpụrụ obi gị, n’ihi na ọ bụ gị ka ọ dị mkpa ka m chebe.”+